जाडोमा ओठ फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब यसो गनुहोस् - khull Postजाडोमा ओठ फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब यसो गनुहोस् - khull Post
जाडोमा ओठ फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? अब यसो गनुहोस्
पुरुषोत्तम ढकाल २ पुष २०७६, बुधबार १०:१२ 246 Views
काठमाडौँ : अहिले जाडोको मौसम छ सुरु भएको छ । यो मौसममा हात, खुट्टा, गाला, ओठ बढी फुट्ने गर्छ । तर यो साधारण स्वास्थ्य समस्या हो ।अरु भन्दा ओठ शरीरको सानो भाग भएकोले पनि यो फुट्यो अलि धेरै समस्या पार्छ । ओठ फुटेपछि केही खाँदा पोल्ने, हाँस्दा दुख्ने र अनुहारको सौन्दर्य बिग्रने समस्या हुन्छ ।
जाडो मै किन फुट्छ ओठ ?
जाडोमा घर बाहिर निस्कनुभन्दा अगाडि कुनै तैलीय पदार्थ ओठमा दल्ने र केही छिनपछि सूतीको कपडाले हल्का पुछेर निस्केमा केही रक्षा हुन सक्छ ।
हेमाेग्लाेबिन कमी किन हुन्छ र के हुन्छ यसबाट खतरा ?
स्किनलाई सुन्दर बनाउने राम्रो उपाय वाक्सिङ्ग